Sei attento all'infinito numero di modi in cui Dio sta cercando di entrare nella tua vita? | Io amo Gesù
You na-elezi anya n'ọtụtụ ụzọ Chineke na-anwa ịbanye na ndụ gị?
“Mụrụnụ anya! Maka na ị maghị ụbọchị Onyenwe gị ga-abịa “. Matiu 24:42
Ọ bụrụkwanụ na taa bụ ụbọchị ahụ?! Gịnị ma ọ bụrụ na m matara na taa bụ ụbọchị onyenwe anyị ga-alaghachi n’ụwa n’ịma mma ya na ebube ya maka ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe? Ga-akpa àgwà dị iche? O yikarịrị ka anyị niile ga-eme ya. Anyị nwere ike ịkpọtụrụ ọtụtụ mmadụ dịka o kwere mee ma gwa ha maka mbịaghachi nke Onye-nwe na-abịanụ, kwupụta, ma tinye ụbọchị ahụ n’ekpere.
Ma gịnị ga-abụ azịza kasị mma nye ajụjụ dị otú ahụ? Ọ bụrụ na, site na mkpughe pụrụ iche sitere na Chineke, eme ka ị mata na taa bụ ụbọchị nke Onyenwe anyị ga-alọta, kedụ azịza kacha mma? Fọdụ atụ aro na ezigbo azịza ya bụ ka ị na -echekwa ụbọchị gị ka a ga-asị na ọ bụ ụbọchị ọzọ. N'ihi gịnị? Maka na anyị niile na-ebi kwa ụbọchị dị ka a ga-asị na ọ bụ nke ikpeazụ anyị ma na-ege Akwụkwọ Nsọ ahụ dị n'elu ụbọchị. Anyị na-agba mbọ, kwa ụbọchị, “ịmụrụ anya” ma dịrị njikere maka nloghachi nke Onyenwe anyị n’oge ọ bụla. Oburu na ayi nabata akwukwo nso a, oputara na odi nfeghari ya taata, echi, abia ozo, ma obu otutu aro site ugbua.
Mana oku a “inwu” na-arutu aka n’ihe kariri obibia ikpeazu na nke di ebube nke Kraist. O n’arutu aka oge obula n’ubochi obula mgbe Onye-nwe-ayi biakutere anyi site n’amara. Ọ na-atụ aka na ntụnye ọ bụla nke ịhụnanya Ya na ebere Ya n’ime obi anyị. Ọ na-ezo aka na ntanye na-aga n'ihu ma dị nro na-akpọ anyị ka anyị bịaruo Ya nso.
You na-elezi anya ka Ọ na abịakwute gị n'ụzọ ndị a kwa ụbọchị? Na-amụrụ anya maka ọnụọgụ na-enweghị ngwụcha nke ụzọ ọ na-anwa ịbanye na ndụ gị n'ụzọ zuru oke? N’agbanyeghi na anyi amaghi ubochi nke onye nwe anyi n’abia na mmeri Ya ikpe azu, anyi maara na ubochi obula na oge obula bu ubochi obula n’ime obibia Ya n’amara. Gee ya ntị, gee ntị nke ọma, mụrụ anya ma mụrụ anya!
Onyenweanyị, nyere m aka ịchọ olu gị ma youra ntị na ọnụnọ gị na ndụ m. Ka m mụrụ anya ma dịkwa njikere ịge gị ntị mgbe ị na-akpọ oku. Jesus ekwere m na gị.